बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा दुई वर्षको कार्य विवरण सार्वजनिक « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा दुई वर्षको कार्य विवरण सार्वजनिक
२०७८, २३ चैत्र बुधबार १७:१६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, धरान । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले उपकुलपति भएपछि दुई वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विसं २०७६ चैतमा पाँच वर्षका लागि उपकुलपति नियुक्त भएका गिरीले यो अवधि प्रतिष्ठानमा भएका उपलब्धिपूर्ण काम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश नं १ कै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल र मेडिकल कलेजसमेत रहेको प्रतिष्ठानले राजनीतिक खिचातानी र कोभिड महामारीका बाबजुद पनि यो अवधिमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको डा. गिरीले बताए । प्रतिष्ठानले अस्पताल सेवा, शैक्षिक गतिविधि र प्रशासनसमेत गरी तीनैतर्फ उल्लेख्य सुधार गरेको जनाएको छ । यो उपलब्धि प्रतिष्ठानको इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो भएको उपकुलपति गिरीको भनाइ छ ।
यस प्रतिष्ठानले अस्पतालमा आउने मात्रै नभएर अस्पतालको पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई समेत टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराएको छ । दुई वर्षको अवधिमा सुनसरी मोरङ र धनकुटाका झन्डै १२ हजारले यस्तो सेवा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा.पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै अस्पतालमा रहेका पुरानो प्रणालीका ६० डेन्टल चेयरमध्ये ३० वटा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधिको इलेक्ट्रिकल डेन्टल चेयर प्रतिस्थापन गरिएको छ । मेडिसिन र सर्जरी वार्डका सम्पूर्ण शय्यामा मेडिकल ग्यास पाइपलाइन जडान गरिएको, पेइङ वार्डका हरेक शय्यामा पाइपलाइन पु¥याएर नियमित भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
अस्पतालले एक–एक हजार लिटर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट, केन्द्रीय प्रयोगशालाका लागि अत्याधुनिक एकीकृत बायोकेमेष्ट्री एनालाइजर तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहकार्यमा स्किल ल्याब स्थापनाका लागि पहलसमेत गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको उपकुलपति डा. गिरीले बताए । प्रतिष्ठानभित्र १५ वर्षदेखि हुन नसकेको कर्मचारी बढुवा गर्ने प्रक्रिया थालिएको, कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब वृद्धि भएको पनि उहाँले विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै अस्पतालको सुधारका लागि नेपाल एडमिनिष्ट्रेशन स्टाफ कलेजसँगको सहकार्यमा पहिलो चरणको ओ एन्ड एम सर्भे गरिएको छ । प्रतिष्ठान विकास सुधारका लागि स्थानीयवासीको पहुँचका लागि ‘लोकल फ्रेन्ड्स अफ बिपिकेआइएचएस’ गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन तथा सेवाको दिगो सुधारका लागि अस्पतालका डेपुटी निर्देशक डा. विकास शाहको नेतृत्वमा सुधार कमिटी गठन गरिएको, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि दुईवटा डिप बोरिङका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको समेत उल्ल्लेख गरिएको छ । अस्पतालभित्रको इनर्जी खपत व्यवस्थापनका लागि इनर्जी अडिट गरी अनावश्यक इनर्जी खर्चको नियन्त्रणको कामसमेत गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
आकास्मिक कक्षमा आउने बिरामीहरुलाई थप सुविधा र प्रभावकारी ढङ्गले उपचार सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ मेडिकल उपकरण तथा शय्या वृद्धि गरिएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुरामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै आकस्मिक वार्डमा १० थान पेसेन्ट मनिटर पनि जडान गरिएको छ । यो मेशिनले अक्सिजन लेभल, इसिजी, मुटुको चाल, श्वासप्रश्वासलगायत मनिटरिङ गर्ने काम गर्छ । यो मेशिनको जडानले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे लगातार अनुगमन गरी बिरामीको गुणस्तरीय उपचार गर्न थप सहयोग मिल्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यस्तै सिकिस्त बिरामीका लागि हाई फ्लो डिभाइस, डेफिब्रिलेटर, इमर्जेन्सी क्रास कार्ट पनि थप गरिएको सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
इमर्जेन्सी ल्याबबाट दिइने सेवाहरुलाई अझ बढी द्रुत गतिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक औषधिलगायत अत्यावश्यक कुरा व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशङ्कर साहले जानकारी दिए । बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण परीक्षण इमर्जेन्सी ल्याबबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए ।
गम्भीर प्रकृतिका बिरामी तर भेन्टिलेटरको आवश्यकता नपर्ने बिरामीका लागि आकस्मिक कक्षमा एचडियु (हाई डिपेडेन्सी युनिट) शय्या पनि चाँडै जडान गर्न लागिएको साहले बताए । आवश्यकता अनुुसार आकस्मिक कक्षमा शय्या सङ्ख्या पनि बढाउँदै जाने प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ । जनशक्ति अभावलाई दृष्टिगत गरेर करारमा चिकित्सकको समेत माग गरिएको बताइएको छ ।
प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा दैनिक १३० जनाभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन् । एक सयभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । रासस